के साउदी अरबका राजकुमार सलमानको अन्त्य हुँदैछ?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
के साउदी अरबका राजकुमार सलमानको अन्त्य हुँदैछ?
बीबीसी। साउदी अरबका विवादित युवराज मोहम्मद बिन सलमानलाई लिएर मानिसहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया छ। मोहम्मद बिन सलमानलाई पश्चिमा मानिसहरु एमबीएस नामबाट चिन्छन्। टर्कीस्थित साउदीका वाणिज्य दूतावासमा दुई अक्टोबरमा साउदीकै चर्चित पत्रकार जमाल खाशोज्जीको हत्यापछि पश्चिममा एमबीएसको छवि वा जो हुनको ब्राण्ड थियो त्यो अहिले नराम्रोसँग धमिलो भएको छ।
साउदीले आधिकारिक रुपमा यो हत्यामा युवराजको कुनै हात नभएको बताएको थियो। खाशोज्जीको हत्याका धेरै कुरा बाहिर आएका छन् र युवराज सलमानको भित्री सर्कल दीवान अल–मलिकी यसलाई लिएर सक्रिय छन्। खाशोज्जीको हत्यामा धेरै प्रकारका सन्देह छन्। जो युवराज एमबीएसतर्फ नै सोझिन्छन्।
खाशोज्जीको हत्यामा साउदीको तर्क विश्वले नै बुझ्न नसक्ने खालको छ। खाशोज्जीको खुलेर आलोचना गर्ने बानीलाई खाडी मुलुकमा के भनिन्थ्योभने एमबीएस केही गर्न चाहन्छन्।
अर्कोतर्फ के पनि भनिन्छ भने सलमानले हत्या गर्ने आदेश दिएका होइनन्, तर साउदीका रोयल कोर्टका सल्लाहकार सउद अल–काहतानीको यसमा संलग्नताले प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। समस्या के हो भने साउदी भन्दा बाहिर उसको तर्कलाई कसैले पनि विश्वास गरेका छैनन्। सुरुमा त साउदीले खाशोज्जी साउदीको वाणिज्य दूतावासबाट गायब भएको कुरा नै अस्वीकार गरेको थियो।
उसले सुरुमा खाशोज्जी दूतावासमा आएपछि तत्काल निस्किएको बताएको थियो। साउदीले खाशोज्जी दूतावासमा आएपछि विवाद गन थाले र विवाद धेरै भएपछि मारिएको बतायो। साउदीका अभियोजकको नयाँ बयान अनुसार खाशोज्जीको हत्या पूर्वनियोजित थियो। खाशोज्जीको हत्यापछि साउदीको बयान र उसको व्यवहार पूरै शंकास्पद छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यदि एमबीएसले यदि राम्रा वकिल र राम्रा मिडिया सल्लाहकार भएको भए आजको अवस्था आउने थिएन।
एमबीएस यो विषयमा कठघरामा छन्। र, यो घटनापछि पश्चिमी सरकार र बहुराष्ट्रिय कम्पनीले साउदीप्रति आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याएका छन्। १९३२ मा साउदी अरब एक देशका रुपमा एकीकृत भएको थियो। के खाशोज्जी मामिलामा साउदीका सीनियर युवराजबीच एमबीएसलाई लिएर सन्देश बढ्दै गएको हो?
एमबीएसको छवि कस्तो बनेको छ भने उनी मात्र अमेरिकालाई खुशी बनाउन चाहन्छन्। अर्कोतर्फ अमेरिकभित्रै पनि साउदीलाई हतियार बेच्ने कुरामा पुर्नविचार गर्न दवाब बढिरहेको छ।
के साउदीका युवराजको गद्दी सुरक्षित छ? कतिपसम्म भने साउदकिो शाही परिवारमा पनि एमबीएसको व्यवहारलाई लिएर गम्भीरतापूर्वक छलफल भइसकेको छ। सत्ताधारी अल–सउद परिवारमा संकट आएको अनुमान मंगलबार अचानक राजकुमार बिन अब्देलअजीज रियाद पुग्नुले पनि लगाउन सकिन्छ।
अहमद पबन अब्देलअजीज ८२ वर्षीय राजा सलमानका भाइ हुन्। उनी लन्डनबाट आएका थिए र सउद हाससमा उनको स्वागतमा कुनै कसर बाँकी राखिएन। कतिसम्म भने एमबीएसले पनि उनीसँग अंकमाल गरे।
युवराज अहमद यमनमा एमबीएसबाट सुरु गरिएको युद्धको विरुद्ध बोलिसकका छन्। अहमद यमनको विरोधी हुन्। युवराज अहमदले यसअघि भनेका आफू रियाद फर्कनलाई डराइरहेको बताएका थिए। उनले आफूलाई रियालमा नजरबन्दमा राखिने त होइन भन्ने डर लागेको जनाएका थिए। तर अब उनी साउदी फर्किएका छन् र साउदीको नेतृत्वलाई सहयोग गरिरहेका छन्।
अब के प्रश्न उठ्न थालेको छ भने युवराज मोहम्मद बिन–सलमानको भविष्य कस्तो हुन्छ? पहिलो कुरा त उनलाई कडा चुनौती दिनसक्ने केही पनि छैनन्। ३३ वर्षीय युवराजको उदय र उभार निकै तीव्र रुपमा भयो। गत वर्ष जुनमा युवराज घोषित भएपछि उनले साउदीको सत्ता पूरै आफ्नो हातमा लिएका छन्।
मोहम्मद बिन सलमानसँग गृह मन्त्रालय, नेशनल गार्ड र रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। एमबीएस रोयल कोर्टका पनि प्रमुख हुन्। योसँगै आर्थिक नीतिलाई पनि एमबीएसले नै संचालन गरिरहेका छन्। यद्यपी राजा सलमान उनको बुवा हुन् तर साउदीको पूरै सत्ता एमबीएसको हातमा छ।
अक्टुबरमा खाशोज्जी संकट आउनु पूर्व पनि एमबीएसको नीति निकै विवादित भएका थिए। साउदी भित्रै पनि उनको नीतिलाई लिएर प्रश्न उठाउन थालिएको छ।
उनका बुवा राजा सलमानको विश्वास र सत्तामाथि पूर्ण नियन्त्रण गरेपछि २०१५ मा एमबीएसले आफ्ना साथीलाई साथ लिएर यमन विरुद्ध युद्ध सुरु गरेका थिए। यसम विरुद्ध साउदीको युद्धका बारेमा के भनिन्छ भने यो कहिल्यै अन्त्य नहुने युद्ध हो। गत वर्ष एमबीएसले दर्जनौं राजकुमार, व्यापारी अन्य वरिष्ठ व्यक्तिलाई रियादको रिट्ज कार्लटन होटलमा नजरबन्द गरेका थिए।
उनीहरुलाई त्यतिबेलासम्म नजरबन्दमा राखियो जतिबेलासम्म उनीहरुल भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा फिर्ता गर्न राजी भएनन्।
अर्कोतर्फ एमबीएस स्वयं आफ्नो जीवनशैलीमाथि लाखौं डलर खर्च गर्छन्। साथै छिमेकी मुलुक कतारसँग पनि साउदीको सम्बन्ध राम्रो छैन।
गत हप्ताको अन्तिममा अमेकिरी विदेश मन्त्री जेम्स म्याटिसले कतारमा आफ्नो ठूलो एयरबेस रहेको भन्दै अमेरिकाले साउदी र कतारबीचको सम्बन्ध सुमधुर भएको हेर्न चाहेको बताएका थिए।
यही वर्ष क्यानडाका विदेशमन्त्रीले साउदी मानअधिकारलाई लिएर एक ट्विट गरेका थिए, त्यसपछि साउदीले क्यानडासँगको सबै राजनीतिक सम्बन्ध अन्त्य गर्यो। साउदी अरबमा अब एमबीएसलाई लिएर गम्भीर छलफल चलिरहेको छ। र, उनको विवादित नीतिमाथि पनि छलफल जारी छ। साउदीमा लाखौं युवाकालागि एमबीएस अहिले पनि आशाका केन्द्र हुन्। उनलाई साहसिक, चमत्कारिक नेता र दूरदर्शी सुधारकका रुपमा हेरिन्छ।
एमबीएसले महिलालाई गाडी चलाउने अधिकार दिएका छन् भने मनोरंजनमाथि लगाइएको कयौं प्रतिबन्धलाई पनि हटाएका छन्। एमबीएस साउदीको अर्थव्यवस्थाको निर्भरता तेलबाट गर्न गर्न चाहन्छन्। एमबीएस भिजन २०३० माथि काम गरिरहेका छन्। उनी तेलबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि रोजगारी सृजना गर्न चाहन्छन्।
साउदीमा राजतन्त्र छ। आसपासका देशमा पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने माहोल बन्यो भने साउदीमा पनि त्यस्तै हुने त होइन भन्ने शाही परिवारमा चिन्ता देखिन्छ। यर युवराजलाई िलएर कुनैपनि भविष्यवाणी गर्नु चाँडै हुन्छ।